🥇 ▷ Shahaadada koowaad ee caalamiga ah ee 8K TV ayaa dhalatay ✅
Shahaadada koowaad ee caalamiga ah ee 8K TV ayaa dhalatay
8K ayaa suuqa joogay ilaa 2015, laakiin hadda marka ay bilaabato in ay codsi dheeri ah ka hesho suuqyada waaweyn. Dhibaatadu waxay tahay telefishanka 8K, isagoo ah teknolojiyad cusub, ugu yaraan reer Galbeedka, sida taleefanka gacanta oo rogrogmi kara, Waxay ku kacdaa lacag badan. Guddiyadu waa kala duwanaan karaan 3,000 ilaa 70,000 yuuro, keydso demos iyo wixii la mid ah, waxyaabaha maalinlaha ah ee aad sida caadiga ah aragtid weli ma aha 8K weli.
Laakiin hal shay oo cad ayaa ah in 4K ay ficil ahaan u tahay heerka hadda jira, oo 8K ay bedeli doonaan dhowr sano gudahood. Sidaa darteed, si loo helo shuruudo isku dhafan, Samsung Electronics maanta waxay ku dhawaaqday heshiis ay la gashay 8K Association (8KA) inay aasaaska u dhigeyso barnaamijka shahaadada koowaad ee 8K TV caalami ah iyo in la gaaro heerar shuruudo u ah shahaadada TV-ga oo ku qalabeysan xalka ugu sarreeya.
Barnaamijka shahaadada 8KA
Barnaamijka shahaadada 8KA raadinta Kala saar TV-yada afar laab kabadan oo ka badan heerarka 4K TV, oo inbadan leh:
– Bandhig heer sare ah marka loo eego noocyo kala duwan oo firfircoon (HDR)
Sidaa darteed, shuruudaha muhiimka ah ee shahaadadan waa hantida telefishanka. 7680 x 4320 qaraarka, dhalaalaya in kabadan 600 nits, HDMI 2.1, iyo Codaynta Muuqaal Sare oo Hufan (HVEC).
Shirkadaha kujira iskaashigan, sida Samsung Electroniga, waxay awoodi doonaan inay xayeysiiyaan TV-ga sida 8K kadib markay haystaan ​​8KA shahaadadan. Sidoo kale, 8KA ayaa raadin doona “Kordhinta dadaalkaaga barnaamijyada waxbarashada sanadka dambe, si kor loogu qaado kaqeybgalka, hal-abuurka, iyo hormarinta waxyaabaha ku jira cilmiga deegaanka 8K, dhammaan la-hawlgalayaashaaga.”
Waqtigaan, in kabadan 22 shirkadood waa shuraako ama ururo laxiriira 8K Association, iyo shahaadadan cusub, waxaa jiri doona shuruudo isku dhafan oo udhaxeeya badeecooyinka si loo cadeeyo gudiyada 8K.